यी ६ चिज घरमा राख्नाले, कहिल्यै हुँदैन धनको कमी ! – Krazy NepaL
November 24, 2021 99
अधिकाँश परिवारमा कमाइ भएपनि घरमा धनको अभाव रहन्छ । घरमा पैसाको अ’भावले त’नाव पैदा गर्छ । कतिपय ब्यक्तिलाई अत्याधिक मेहनत गर्दा पनि पैसा हात लाग्दैन ।यस्तो वास्तु दो’षका कारण हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । वास्तु शास्त्रका अनुसार घरमा केही बस्तुलाई राख्दा धनको अ’भाव हुँदैन । घरमा राख्नुस् यी ६ कुरा धनको अ’भाव हुँदैनः
घरमा माटोको घ’डा राख्नुस् । यसले घरमा पैदा गर्ने सकारात्मक उर्जाले धनको अभाव हुन दिँदैन । तर घडामा सँधै सफा पानी भरेर राख्नुस् ।पश्चिम दिशामा पञ्चमुखी हनुमानको प्रतिमा वा तस्विर लगाउनुस् । यसको नित्य पुरा गर्दा घरमा पैसाको अ’भाव हुँदैन ।
३- घरमा वास्तु दोष हुने भएका कारण धनको अ’भाव हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । वास्तु दो’ष हटाउनका लागि घरमा वास्तु भगवानको प्रतिमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसो गर्दा धनको अ’भाव दुर हुन्छ ।४- घरको मुख्य ढोकामा लक्ष्मी र कुवेरको मुर्ती वा स्वस्तिकको चिन्ह राख्नु शुभ मानिन्छ । यो चिन्हले घरमा अ’भाव हुन दिँदैन ।
५- घरका अधिकाँश सदस्यहरुले धेरै समय विताउने कोठा वा स्थानमा चाँदी, पित्तल वा तामाको पि’रामिड राख्नुस् । यसले घरमा धनको अ’भाव हुन दिँदैन ।६- वास्तु शास्त्रमा घरमा शुभ उर्जा पैदा गर्नका लागि धातुले बनेको कछुवा वा माछा राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले घरमा आर्थिक अ’भाव हुन दिँदैन ।
Prevश्रीमान बिदेशमा श्रीमतीले नेपालमा गरिन् यस्तो १ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस्
Nextछिन छिनमा पिसाब लाग्ने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्ता घातक रोगको संकेत
थाइराइड र डाइबिटिजलाई जरै देखि निर्मुल पार्न खानुहोस् यो फल